Mahad Salaad: Kiiska Ikraan inta la malaynayo waa ka weyn yahay | Baahin Media Warka Somalia iyo Somalida
WARARKA MAANTA Mahad Salaad: Kiiska Ikraan inta la malaynayo waa ka weyn yahay
Mahad Salaad: Kiiska Ikraan inta la malaynayo waa ka weyn yahay
Xildhibaan Mahad Salaad oo ka tirsan golaha shacabka ee muddo xileedkiisu dhammaaday ayaa markale ka hadlay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka, gaar ahaan khilaafka Farmaajo iyo Rooble iyo kiiska Ikraan Tahliil Faarax
Mahad Salaad oo ka hadlayey wada-hadalladii u dambeeyey ayaa shaaca ka qaaday in weli Farmaajo uu ku dhagan-yahay in maxkamadda laga soo celiyo kiiska Ikraan, sidoo kalena uu isagu magacaabo agaasimaha hay’ada nabad sugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya.
Ujeedka ayuu ku sheegay in la doonayo in lagu baabi’iyo raadka kiiska Ikraan Tahliil Faarax oo sababay khilaafka iyo xiisadda siyaasadeed ee haatan ka taagan magaalada Muqdisho.
“Farmaajo wuxuu ku dheganyahay: Kiiska Ikraan Tahliil waa in maxkamada laga soo celiyo si Fahad loo badbaadiyo. Taliyaha NISA waa inaan anigu soo magacaabo, si loo baabi’iyo raadka kiiska Ikraan!” ayuu ku yiri xildhibaanka mucaaradka ah ee Mahad Salaad.
Sidoo kale wuxuu tilmaamay in kiiska Ikraan uu ka weyn yahay inta loo maleynayo, isla-markaana wararka soo baxaya haddi ay xaqiiqo noqdaan ay ceeb ku tahay dowladnimada.
“Kiiska Ikraan inta la malaynayo waa ka weyn yahay waxaana soo baxaya xogo hor leh oo hadii ay run noqdaan ceeb iyo foolxumo aan la arag oo la maqal ku ah dowladnimada Soomaaliya, Dhaqankeena suuban iyo Diinteena Islaamka!” ayuu raaciyey Mahad Salaad.
Hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyada lagu kala tegay natiijo la’aan wada-hadalladii u dhexeeyey Farmaajo iyo Rooble oo u burburay qodobka la xiriira kiiska Ikraan Tahliil.
Previous article6 Dating Programs That Will Lead You to Your Very Own Trio Aspirations
Next articleWafdi ka socda Qaramada Midoobay oo ku soo wajahan Muqdisho iyo arrinta Ikraan Tahliil oo…
Cabdiweli Cali Gaas oo tartanka ugu culus kala kulmaya siyaasi aan musharax ahayn(Waa kuma shaqsigaas)
Daawo:Muqaal duubtay CCTV oo shucuubta african hadal heyn xoogan kadhex dhalisay kadib Nin cadaan ah iyo nin African oo….
Tirada dadka uu ku dhacay cudurka Korona oo kor u dhaaftay hal malyan
DEG DEG+XOG: Wasiir ku xigeenka W.Arrimaha Debadda Somalia oo lagu xiray Xaruunta CID-Muqdisho…
Booliska Muqdisho oo xabsiga dhigay Wiil & Aabihiis dhac geysanayey (Daawo Sawirro)
Maamulka Wajeer Oo Odayaash Gedo La Kaashanaya Amniga Gobolka
Kulan deg deg ah oo Kismaayo uga socda Mas’uuliyiinta Jubbaland
Daawo:Midowga Musharaxiinta oo magacaabay guddiga bad-baadinta doorashooyinka dalka